HomeSuuqa kala iibsigaDaafaca u nugul dhaawaca Man utd oo ka tagi kara kooxda bisha Janaayo
Wakiilka daafaca dambeedka dhexe ee Manchester United Eric Bailly ayaa sheegaya in 26 jirkaan uu ka tagi karo Old Trafford hadii xaaladiisa ciyaareed aysan wax iska bedelin, iyadoo ay jiraan warar xan ah oo sheegaya inuu ku biirayo kooxda Serie A ka dhisan ee AC Milan.
Daafacii hore ee Villarreal ayaan u safan kooxda Ole Gunnar Solskjaer tan iyo guuldaradii 6-1 ee ka soo gaartay Spurs bishii October.
Ivory Coast Internationale daafacooda waxay oo saarnaa miiska daaweynta dhaawac qaliin looga sameeyey muruqa ah usbuucyadii la soo dhaafay, si kastaba ha ahaatee, wakiilkiisa Graziano Battistini ayaa shaaca ka qaaday in talaabada qatarta ah ay tahay in laga bixiyo liiska xidiga kooxda hadii Bailly uusan kalsooni ka tusin macalin Solskjaer.
Isaga oo la hadlaya Calcio Mercato, Battistini waxa uu yidhi: “Wiilku waxa uu ku jiraa xaalad muhiim ah sida tan United, ka hor inta aan la qiimayn bixitaanka waa in ay jiraan xaalado gebi ahaanba sax ah.
“Fikradda Milan waxaa laga yaabaa inay leedahay caqli gal, laakiin waxaan u baahanahay inaan qiimeyno waxyaabo badan oo saameyn ku yeeshay jawiga laacibka, maanta waxaan ka hadlaynaa waxyaabo badan oo quseeya daafaca. Khibrada Red Devils waxay ku xiran tahay sida had iyo jeer ay u arkaan laacibka tayadiisa ciyaareed.
“Hadii uu helo fursado sax ah, aniga ahaan wuxuu noqon karaa ciyaaryahan muhiim ah oo xaliya dhibaatooyinka kooxda qaar. Haddii waxaas oo dhami aysan dhicin, waxaa iska cad in xaaladda ay u baahan tahay in la qiimeeyo, laakiin hadda waa xilli hore waana muhiim in la sheego waxyaabaha qaarkood.